Ny foto-tsakafo dia fotoana tena tsara, saingy mandritra izao fotoana izao dia mila mitandrina sy mitandrina ianao. Tsy misy olona afaka miaro tena amin'ny viriosy amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, indrindra raha ny olona rehetra dia mikiakiaka sy kohaka.
Na dia mandalo anao aza ny aretina, dia mbola mila mahafantatra ny fanafody mahatsiravina amin'ny vehivavy bevohoka:
Phytomixers . Fikarakarana alikaola, mampitombo ny tsindry reny avy amin'ny reny ary mampiakatra haingana ny fony. Izany dia enta-mavesatra mafy eo amin'ny rafitra vascular ny zaza, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fivoarany ara-batana.
Mampihena ny sambo . Ny loza ateraky ny loza mitatao amin'ny zaza mitaingina ny orona dia ampy tsara, satria azonao atao ny manakorontana ny fo amin'ny foetus. Ny fanafody toy izany dia mampiankin-doha, ary raha tsy misy azy ireo, dia lasa sarotra kokoa amin'ilay vehivavy bevohoka hiatrehana ny fahasosoran'ny orona.
Antibiotika . Ny tsimokaretina takelaka mafy avy amin'ny hatsiaka dia tena tsy azo tsinontsinoavina mandritra ny fitondrana vohoka, indrindra amin'ny trimestre voalohany. Momba ny injeniera, mety tsy hisy ny fanontaniana. Azony atao ny manaparitaka na manakana tanteraka ny fivoaran'ny zaza.
Noho izany, raha efa tsy milamina ianao, dia aza manemotra ny fitsaboana. Raha ny zava-misy, amin'ny aretina atahorana dia tsy maintsy mandray fanafody avy amin'ny vokatra vokatry ny hatsiaka ianao, ary raha ny tsara indrindra dia ny mamono ny fampiasana fanafody.
Inona no tokony halaiko amin'ny hatsiaka?
Misy fomba mahomby mahomby hiadiana amin'ny hatsiaka:
Horseradish . Ao amin'ny fototry ny zavamaniry, mila ampiana siramamy toy izany ianao ary avelao hiteraka mandritra ny roa tolakandro izany. Miaraka amin'ny hatsiaka mafana, alao ny fanafody isaky ny ora.
Vahaolana sira avy amin'ny hatsiaka iombonana . Amin'ny rano iray dia mila ampiana menaka sasao kely ary manasà ny oronao na mividy rano tsy misy loto ao Salin, Aquamaris eny amoron'ny rano.
Fanafody fitsaboana ho an'ny vehivavy bevohoka . Azo atao ny mangatsiaka, satria azo antoka sy mahomby amin'ny fitondrana vohoka.
Fikolokolo-koditra nify - vokany
Firafitry ny lohan'ny foetal amin'ny herinandro
Afaka be ve ny dite maitso?
Ny tsy fisian'ny fiheverana ve dia famantarana ny maha-bevohoka azy?
Toro-tadim-poitra manodidina ny tendany 1 ora
Myoma ao amin'ny tranonjaza mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fiterahana amin'ny fiterahana
Folaka fanafody ho an'ny toxikose
Ahoana no hanisana ny lanjan'ny foetus?
Ahoana ny fomba hanaovana mozika?
Ity retriever ity dia tsy saro-kenatra ny fery eo amin'ny nifiny!
Caramel amin'ny siramamy
Fanomezana ho an'ny vahiny ao amin'ny fampakaram-bady
Staphylococcus amin'ny tendany - soritr'aretina
Ahoana ny fisafidianana kilalao?
Ahoana no hanamboarana voanio mafana?
20 fonosana voalohany, izay lasa asan'ny zavakanto
Kitapo miaraka amin'ny apples amin'ny kefir - fomba tsotra entina mamolavola ny tsiro tsirairay!
Ny kitapo Shepherd amin'ny gynecology
34 torohevitra hanampy anao amin'ny fitaizana ray aman-dreny
Kristen Stewart, Elizabeth Banks sy ny kintana hafa dia nanaja an'i Julianne Moore tao amin'ny Tranombakoka maoderina
Inona no endrik'ilay lamba rongony?
Ny labozia hazo dia hevitra tsara indrindra hanamboarana lamandy